Umphakeli wephakethe lomkhiqizi we-kingUP - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Umphakeli wephakethe lomkhiqizi we-kingUP
Thuthukisa izinga lokubonisa lomkhiqizo nesitayela, futhi eduze kwesidingo semakethe entsha. Uzuze i- "China Top 30 ehlanganisiwe Yezinto Zokwakha Wall Wall", "Imikhiqizo ye-China Green" kanye nokunye ukuhlonishwa!
I-KingUP ingumkhiqizi wezobuciko osezingeni le-SPC eChina. Eminyakeni edlule, ibibophezele ekuhlinzekeni abathengi ngemvelo eluhlaza futhi enobuhle bemvelo, imikhiqizo yasekhaya yezobuchwepheshe kanye nokuhlangenwe nakho kwasekhaya okunqenqemeni. Ngaphezu kokukhiqiza, ibuye ibe nokuphatha okuhlanganisiwe kokuthuthukiswa komkhiqizo, ukumaketha, nezinsizakalo. Imisebenzi.
Besilokhu sinamathela eshumini "lokugxila kwikhwalithi, ubuqili njengesixhumanisi esiyisihluthulelo, ikhasimende kuqala", elikhuthaza ifilosofi yebhizinisi "lokuhlola nokwenza izinto ezintsha, ukuhlukahluka kanye nokuwina", siphinde sinikeze amakhasimende ethu ngemikhiqizo ephezulu kakhulu yensiza, izinsizakalo zobuchwepheshe bobuchwepheshe nokuzinikezela Ukuze ube ngumkhiqizi ophansi omuhle kakhulu emkhakheni we-SPC floor ekhaya nakwamanye amazwe.
I-kingUP floor isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe obuvela eYurophu naseBelgium, futhi ingenise imishini engeniswayo evela eJalimane. Ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, nomqondo wenkonzo ophelele, ibuye isebenzise amafomula wokukhiqiza ahlukile ukwenza ukuthi umhlaba uphephe, ungahambisani nemvelo futhi ube nobungane bemvelo. Kube nokugxumela okuqhubekayo phambili. Njengamanje, imikhiqizo ka-KingUP engaphansi komhlaba yathunyelwa e-India, Philippines, Thailand, South Korea, Greece, United States, Canada nakwezinye izimakethe zomhlaba jikelele.
Ukuqala ngekhwalithi nokuvikelwa kwemvelo, i-KINGUP flooring ihlala inamathela emcabangweni wokucwaninga ngomkhiqizo onemvelo futhi onempilo wokukhuthaza ukukhuthaza imboni yokugcwala emigwaqweni ekhazimulayo "ephezulu kakhulu, enobungani bemvelo nenempilo kakhudlwana", kusukela ekukhetheni izinto ezibonakalayo, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa kuya ekuthengisweni nasekusebenzisweni kwensiza. Yonke inqubo yokulawulwa kwekhwalithi nokuphishekela inzuzo yemikhiqizo engabizi kakhulu idale idumela elihle emehlweni abathengi.
Ngobuchwepheshe, abakhiqizi be-KingUP bayaqhubeka nokwenza impumelelo kanye nezinto ezintsha, ezithuthukise kakhulu impahla ebonakalayo yemikhiqizo yaphansi. Ngokwesisekelo sokuhlangabezana nezidingo zemakethe yabathengi ukubukeka nokunethezeka kwezinto zokwakha phansi, sebezuze umsebenzi osebenza kangcono kakhulu. Ngasikhathi sinye, siyaqhubeka nokuklama nokukhulisa imidwebo emisha yokwakha phansi, ukuthuthukisa ubuchwepheshe bomkhiqizo nokulawulwa kwekhwalithi ukufezekisa izidingo eziguqukayo zemakethe yabathengi bokuthuthuka kwasekhaya, ukuthuthukisa amamaki wokubonisa umkhiqizo nezifiso zesitayela, kanye nezidingo ezintsha zemakethe. Uzuze i- "China Top 30 ehlanganisiwe Yezinto Zokwakha Wall Wall", "Imikhiqizo ye-China Green" kanye nokunye ukuhlonishwa!
Umphakeli wephakethe lomkhiqizi we-kingUP Okuqukethwe okuhlobene